Cdg Ngesondo Imidlalo: Ihlabathi Ke Likhulu Ngesondo Gaming Portal
Ukufikelela CDG Ngesondo Imidlalo Ngoku
Ukuba ufuna anayithathela ukuba ujonge zonke kwi Internet kuba indawo ukufumana ukufikelela omkhulu CDG Ngesondo Imidlalo, kukho okulungileyo ithuba ukuba nawe futhi ke uthando into esinayo ezifumanekayo kuwe. Oko kwaqala zethu zoluntu, thina anayithathela isebenza jikelele ikloko ukuzisa horniest gamers ngaphandle kukho ufikelelo hottest amaphulo kwazeke ukuba umntu kwaye nyani ukuba kuvavanya ngokwethu njengoko igunya kule ndawo., Thina anayithathela wabeka phantsi umthetho welizwe kwaye ingaba ngoku sele ukulungele ukuqwalasela ukuba nabani na ufuna ukuza ukuya kwi-i-umzamo thelekisa into esinayo ukunikela – ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, kuya bonakala njenge CDG Ngesondo Imidlalo ngu phandle apha zonke kuphela ngomhla phezulu lokutya lesixokelelwane. Siza constantly insist ukwenza ukuqinisekisa ukuba ufumana ukubona best of eyona kwaye kulungile, makhe nje kuthi ukuba uziva ngathi ukudlala abanye legendary amaphawu phambi ezininzi ezinye gamers ngaphandle apho ndafumana nethuba, sibe i-go-ukuba ndawo., Eli qela e-CDG Ngesondo Imidlalo ubani proven ingoma imbali kwi-isithuba kwaye asinako overstate nje njani thrilled sisebenzisa ukuze ukwazi langoku kuwe le incredible ingqokelela ka-imidlalo ukuba ingaba yesiko made wakho ngesondo gratification. Anomdla ukufunda ngakumbi? Ngoko funda ngezantsi: ndizokwenza kukunika iinkcukacha ezipheleleyo yintoni CDG Ngesondo Imidlalo sele ukunikela!
Mhlawumbi eyona ukucacisa uxanduva lwemimandla sebenza apha ukuba ngenene sells yayo yonke impahla ukuze gamers angeliso erection yile yokuba zethu imizobo ingaba ngokwenene ihlabathi-class. Nje kuba olukhawulezayo jonga i-avareji umgangatho wethu imidlalo – ingaba ubona amanqanaba thina anayithathela uye ukuze enze ezi amaphawu njengoko incredible kangangoko kunokwenzeka? Thina anayithathela invested kwi-buchule ukuba ubeka i-visual aesthetic zethu amaphawu ngaphezu kwento yonke kwaye njalo kude kube ngoku, ke nyani sele ihlawulwe, inzala., Siyawubulela umsebenzi wethu ababhekisi phambili kwaye compensate kwabo ngokufanelekileyo – ngu enkosi kuni guys ukuze sibe nako ukuhlawula nabo ngoko ke kulungile kwaye get enjalo omkhulu ubuyisela! Abo baqhuba kakuhle kakhulu umsebenzi nzima kwaye bonisa ixesha ixesha kwakhona ukuba isizukulwana esilandelayo imizobo ingaba apha ekunene ngoku kwi-porn isithuba. Siya kuba nento yokuba skeptical ka-nabani na kwi-mainstream isithuba ekubeni amaphawu ukuba jonga njengoko okulungileyo njengoko zezethu – vumelani yedwa yobulali ehlabathini ka-porn gaming!, Suffice kuthi ukuba ukhe ubene ukudinwa ka-avareji ujonge iyamkhulula ukuba musa ukwenza kakuhle kakhulu kwi amehlo, ngu uqiniseko luncedo ukuba CDG Ngesondo Imidlalo sele phezu kuyo yonke indawo engenye kuba ufuna ukudala i-akhawunti yakho apha kwaye sibone ukuba yintoni ikamva CDG Ngesondo Imidlalo sele ukunikela. Siza kusoloko bonisa ukuba zethu isicwangciso-buchule olusemgangathweni yi best omnye ukuthatha!
Rhoqo ukuhlaziya ishedyuli
Kukho i-incredible imfuneko phandle phaya kuba imidlalo, kwaye ngexesha lethu library ngu big ngokwaneleyo kuba amawaka iiyure fun, kuya ngxi kunjalo ukuba abantu kuza emva apha ixesha ixesha kwakhona ukufumana kwabo a inyama dose ezilungileyo ubomi. Akukho nto ngakumbi ngaphandle-imida xa oko iza imveliso, ngaphandle kokuba ukuba xa sifuna apapashe umdlalo, oko sele ukuba abe phezulu kwaye ugqibile – nto elifutshane ukuba iza kwamkelwa! Thina ngoku kuba stockpile ka-55 amagama eencwadi, kodwa ukukhutshwa entsha enye roughly kanye ngenyanga., Nceda qaphela ukuba zethu schedules ngokupheleleyo kuxhomekeka xa sifuna ukuba umdlalo yiyo ngokwenene ezilungele ukuba kubekwa phandle phaya. Ukuba asinaphawu kukholelwa umdlalo kwenzelwa kwaye ulungile kuba masses, kuya kuqhubeka kuqulunqwa. Into yokuba lo mba kukuba releasing umdlalo phambi kwexesha kakhulu kukuba kude bangaphaya kakhulu emva kwexesha! Sathi kanjalo jonga ukuba freshen phezulu edlulileyo amaphawu njengoko kwaye xa ezikhoyo: ngu preference ka-zezethu ukuba CDG Ngesondo Imidlalo uba a ndawo oko akuthethi ukuba vumelani nawuphi na umdlalo rot, ingakumbi ukusukela kaninzi kunokuba hayi, kulula umva kwaye dibanisa lick ka-indlela yethu imidlalo kunokuba ukwakha entsha okkt ukusuka ekuqaleni!, Eli qela kanjalo sele polls ngaphakathi ukuba uza vumelani usenza into efumana a freshener, ngoko ke, qiniseka ukuba ivoti kwaye vumelani kuthi ukwazi ukuba ucinga ntoni!
Omnye ibaluleke kakhulu iziqalelo ze amava e-CDG Ngesondo Imidlalo yindlela elula yokuba sigcina zethu imidlalo njengoko exclusive kangangoko sinako. Ntoni ndithetha ngako oku, kanye kanye? Kulungile – kukho plenty ka-imigangatho phandle phaya ukuba ufuna ukuthenga amalungelo ethu imidlalo kwaye ke wabelane nabo yabo ababukeli bomdlalo bangene: kodwa oko akuthethi ukuba iphaphazela apha. Yintoni le essentially kuthethwa kukuba ukuba ufuna ukuba bonwabele database sino, nawe futhi ke kufuneka ukudala i-akhawunti apha. Siphinda kakhulu secretive zethu iinkqubo kwaye kulungile, makhe nje kuthi ukuba zethu ikhowudi yemvelaphi ebaluleke ezininzi ixabiso wonke umntu ngaphandle phaya!, Kengoko ufuna ukubanika nethuba ukubona nje njani complex yonke into emva scenes, ngoko ke ewe: uzaku ufuna ukungena kwethu ukuba ufuna ukuba bonwabele imidlalo sinikeza. Lukwathetha ukuba sibe nako tyhala ngaphandle hotfixes kwaye jikelele iintelekiso a esihogweni ka kakhulu kuyakhawuleza kunokuba ezininzi ezinye izithuba. Emva zonke, ezi imidlalo ingaba yenzelwe kwaye ipapashwe purely kwi-endlwini – sino ezininzi ulawulo phezu kwayo yonke!
A yoqhubekeko-magama kwi-CDG Ngesondo Imidlalo
Ndinga hlala apha kwaye ubhale omnye 5,000 amazwi kwi yintoni yenza CDG Ngesondo Imidlalo ngoko ke liechtenstein omkhulu, kodwa ndicinga ukuba siqukumbele eyona nto amaqela ukuba kufuneka uxoxwa kwaye ke mhlawumbi a decent unye kuba kum thatha isithuba apho ngoko ke ukuba uyakwazi inkqubo ngubani wabe wathi kwaye, ngethemba, yenza i-akhawunti ye-ngokwakho ngoko uyakwazi ukubona yintoni ke njalo. Thina anayithathela ebone i-iyamkhulula lomnye amachaphaza phandle phaya kwaye ewe – baya nje andazi benza ntoni ukuba bakwenze. Njengoko ngenxa oku kunjalo, sijonge phambili zinika ngaba ithuba ukubona ubukrelekrele ka-CDG Ngesondo Imidlalo kwaye sibe nento yokuba ngenene urge ukuba athabathe oko., Enkosi kakhulu ngoko ke esiza kuba ihamba namhlanje – fingers crossed ubona kwaye uyakuthanda CDG Ngesondo Imidlalo nje xa sisenza! Zikhathalele kwaye ndonwabe jerking, umhlobo.